सर्वोच्च अदालतलाई रणमैदान बनाउने को हुन् ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
२०७८ माघ ५, बुधबार १८:५५:००
काठमाडौँ । आजभन्दा १० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीले यस पंक्तिकारसँग एउटा प्रसंगमा भनेका थिए, ‘ढिलोचाँडो हाम्रो सर्वोच्च अदालतभित्र गोली चल्नेछ ।’
अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोली त चलेको छैन । तर, गोली मात्र चल्न बाँकी छ । न्यायाधीशहरुबीचको टकराव निकै खराब मोडमा पुगेको छ । एकअर्काविरुद्ध कालकुट विष जम्मा गरेर बसेका छन् । उनीहरु एकले अर्कालाई अँध्यारो कुनाबाट घुरेर हेर्छन् । एकले अर्कालाई आफ्नो भाग खान आएजस्तो ठान्छन् । कोही कसैलाई कसैप्रति विश्वास र भरोसा छ, न त सम्मान नै । छ त केवल कुण्ठा, रिस र आवेग मात्र ।
सर्वोच्च अदालतलाई यही अवस्थामा अरु केही दिन राखिरहने हो भने यसले भयानक दुर्घटना निम्त्याउने देखिँदै छ । अदालतभित्रको समस्या अब चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहने कि नरहने भन्नेमा मात्र सीमित रहेन । त्यस्तै राणापछि दीपकुमार कार्की वा अरु कोही हुने कि नहुने भन्ने मात्र पनि रहेन । अब त कुनै स्वार्थ समूह हावी हुने भन्ने खुला लडाइँ सुरु भइसक्यो । हाराहारीका शक्ति र समूहहरुको टकराव चलिरहेकैले अदालतको विवाद अवतरण हुन नसकेको हो ।
अदालतको ताण्डवबारे राजनीतिक नेतृत्व भलिभाँती जानकार छ । तैपनि निर्णय गर्न सकिरहेको छैन, किन ? किनभने, यो उनीहरुको काबुभित्र पनि छैन । देशका निर्णायक भनिने शक्तिहरुका हात र विवेकसमेत अरु कसैले नियन्त्रणमा राखिरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका केही पदाधिकारीलाई अरु कसैले नचाइरहेको छ । दृश्यमा देखिएका सबै निमित्त पात्र हुन् । प्रोक्सी वार बाहिर देखिएको हो, भित्र नेपथ्यमा अरु नै छन् । ती को हुन् भन्ने पनि छर्लंग हुन अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।
दुर्घटना रोक्ने कसैमा तागत र तत्परता छ भने पनि अब धेरै समय बाँकी छैन । जुनसकै बुेला अब लडाइँले रक्तपातको रुप लिनेछ । यसअघि अनेक प्रकारले अदालतमा कोतपर्व मच्चिएका छन् । ठूल्ठूला उलटफेर भएका छन् । ती उलटफेर रक्तपातविहीन थिए । अहिलेजस्तो सबैले देख्ने खालका मारमुंग्री निकै कम भएका थिए । अब जे हुन्छ, सबैले देख्ने गरी हुन्छ । सबैले बुझ्ने गरी हुन्छ । त्यो परिस्थिति सम्हाल्न को अगाडि आउँछ ? वा यो संस्था नै विघटनमा जान्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यदि प्रधानन्यायाधीश राणा र उनका विरुद्धमा हडतालमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुमा एक रति मात्र पनि यो संस्थाको माया छ भने अझै पनि समझदारीको बाटो खोजे हुन्छ । हरेकले आफ्ना गल्तीकमजोरीको बोध गरे हुन्छ । आत्मसमीक्षा गरी आ–आफ्नो निकास आफै खोजे हुन्छ । नैतिकताकै कुरा गर्ने हो भने अब न्यायाधीशका रुपमा यस संस्थाभित्र रहने नैतिकता सबैले गुमाइसकेका छन् । विवादको घेराभन्दा माथि अब कोही पनि बाँकी छैन । कुनै न कुनै शक्ति केन्द्र र स्वार्थसमूहसँग हरेकको नाता जोडिएको छर्लंगै छ । हरेक न्यायाधीश न्याय सम्पादनमा चुकेका छन् । मुद्दा व्यवस्थापनमा चुकेका छन् । बाहिरका आचरण र व्यवहारमा चुकेका छन् । नागरिकता र लब्धांकपत्रमा चुकेका छन् । जारी गतिरोधका क्रममा पनि सबैले आआफ्नो हैसियत प्रदर्शन गरेका छन् । अब न्यायाधीशको गरिमामय कुर्सीमा बस्न म लायक छैन भनेर स्वघोषणा गरी सबै जना एकसाथ बाहिरिनु सबैभन्दा सम्मानजक र सुरक्षित अवतरण हुनेछ ।